Malunga nawe | Isiseko somvuzo, uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ngawe yenzelwe ukukunceda ukuba ufumane izibonelelo ezilungiselelwe ngokukodwa iimfuno zakho njengomsebenzisi, njengomzali, umlingane, iqabane okanye umntu onomdla. Iya kuba phantsi kolwakhiwo kwiiveki ezimbalwa ezilandelayo njengoko kongeza iindidi ezintsha.
Kwisiseko soMvuzo sigxila ngakumbi kwi-Intanethi. Sijonga impembelelo yayo kwimpilo yengqondo neyomzimba, ubudlelwane, ukufikelela kunye nolwaphulo-mthetho. Sijonge ukwenza ukuba uphando oluxhasayo lufikeleleke kwabo bengezazinzulu ukuze wonke umntu enze ukhetho olunolwazi malunga nokusetyenziswa kwe-intanethi. Sijonga kwizibonelelo zokuyeka iphonografi esekwe kuphando kunye neengxelo zabo baye bazama ukuyeka. Sinika isikhokelo ekwakheni amandla okumelana noxinzelelo kunye nokulutha.
Isiseko soMvuzo siwusekele umsebenzi wazo kwinkcazo yoMbutho wezeMpilo weHlabathi wezempilo yezesondo:
"... imeko yezinto eziphathekayo, ezengqondo, ezengqondo nezentlalo ngokubhekiselele kwisini; akukhona nje ukungabikho kwezifo, ukungasebenzi okanye ukugula. Impilo yesondo idinga indlela efanelekileyo kunye neentlonelo malunga nobulili kunye nobudlelwane bezesondo, kunye nokuba nethuba lokufumana amava okuzonwabisa kunye nokukhuseleka, ngokukhululeka, ukucalulwa kunye nogonyamelo. Impilo yesondo ifumaneka kwaye igcinwe, amalungelo esondo bonke abantu kufuneka ahlonishwe, akhuselwe aze azaliseke. " (WHO, 2006a)
Indawo yethu ayibonisi nayiphi na iphonografi.
Ukuba ungathanda ukusibona sisenza iphepha lelinye iqela elithile, nceda usixelele usebenzisa le fomu ingezantsi.
Ukusuka apha unokunxibelelana namaphepha nge…